Fanenjehina olom-boafidy :: Mety tsy hanana mpisolo toerana intsony ny depioten’i Mahabo • AoRaha
Fanenjehina olom-boafidy Mety tsy hanana mpisolo toerana intsony ny depioten’i Mahabo
Tsy misy afaka hisolo ny toeran’ny depioten’i Mahabo, Razafindrazalia Yvonne, intsony raha toa ka misy ny fanamelohan’ny Fitsarana azy hiditra am-ponja. Nohazavain’ny filoha lefitry ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), Rakotonarivo Thierry fa: « lisitra misy anarana roa ihany no noferan’ny lalàm-pifidianana nirotsaka ho kandidà tamin’iny fifidianana depiote tamin’ny taona 2019 iny.” « Tsy misy intsony ny anaran’olona fahatelo ao anatin’ny lisitra », hoy izy.
Raha toa ka misy ny fanamelohana an’ity depiote nisolo toerana ny vadiny eny amin’ny Antenimierampirenena ity dia mety hisy ny famerenana ny fifidianana any amin’ny distrikan’i Mahabo. “Afaka mangataka ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) ny filohan’ny Antenimierampirenena raha banga io toerana depiote io. Raha hankatoavin’ny HCC izany, dia tsy maintsy miroso amin’ny fifidianana vaovao ny Ceni”, hoy ihany Rakotonarivo Thierry.
Roapolo amby zato andro aorian’ny fanamarihana ataon’ny HCC mikasika an’io fahabangan-toerana io no hanatontosana ny fifidianana depiote amin’ny ampahany ao amin’ny distrikan’i Mahabo. Amin’izao fotoana izao dia eo am-pelatanan’ny Tonian’ny mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana fandravana didy ny raharaha mahavoasaringotra ny depiote Razafindrazalia Yvonne. Miandry ny fanapahan-kevitr’ity rantsam-pitsarana ity ny Fitsarana manokana misahana ny kolikoly.
Fitsarana olom-boafidy :: Mety horaisin’ny PAC ny fanenjehana an’ilay depiote karohina sy ny vadiny